Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez
uMignon du Preez uthi amaMomentum Proteas awabukeli muntu phansi ngaphambi komdlalo olandelayo bedlala ne-Sri Lanka kwi-ICC Women’s World Cup e-England nase-Wales. Iqembu lifike eSomerset ngeSonto futhi laqala amalungiselelo uDu Preez wachaza njengomdlalo “okumele bawunqobe” uma iqembu lithemba ukungena kuma-semi-final.
Ekhuluma ngeqembu elanqoba ngama-runs angu-115 bedlala ne-India eLeicester ngoMgqibelo.
“Besazi ukuthi kumele siwunqobe umdlalo sibhekene ne-India uma sifuna ukufika kuma-semi-final. Amantombazane enza umsebenzi oncomekayo, indlela uLizelle (Lee) ashaya kahle ngaphambili ukuyihlela kahle i-innings, bekukuhle ukubona lokho. Bekunezikhathi lapha esingadlalanga khona kahle, salahlekelwa ama-wicket asheshayo, kodwa uma sekuhlanganiswa konke, ngezwa sengathi wonke umuntu wadlala indima, ladlala kahle lonke iqembu.”
“Kuphinde futhi, abasiphoselayo badlala kahle kakhulu. Kwaba inkundla efanayo nomdlalo we-West Indies ngakho ngicabanga ukuthi amantombazane ayathanda ukudlala khona.”
Emuva kohambo olude ngebhasi beya eSomerset izolo, uDu Preez ukholwa ukuthi iqembu litshengise umdlandla ngesikhathi sokuzilolonga namhlanje, ikakhulukazi emuva kokuthi bathole isikhathi sokuphumula izolo futhi bonke bakhetha ukusicitha ndawonye, bengahlangene nomdlalo.
“Sihambe isikhathi eside izolo,” esho eqhubeka. “Bekukuhle ukuhlangana futhi sithenge oncamnce futhi sihleke nje ehotela, sisuke emdlalweni futhi singakhulumi ngomqhudelwano nokuthi amanye amaqembu enza ini.”
“Sisenkundleni entsha namhlanje, ihlukile kodwa ngenhlanhla sithole ithuba enkundleni ukuze laba abashayayo babone ukuthi kungabanjani ukushaya lapha. Kubukeka sengathi isimo sizohluka kunalesi sase-Leicester. Namhlanje besifuna ukuzwa ukuthi injani inkundla, ukuthi siyizwa injani i-wicket kanye nokuthi umoya ushaya ubheke ngakuphi ngoba kunomoya namhlanje futhi ngathi kuzohlala kunjalo ezintsukwini ezilandelayo. Thina sibheke ekudlaleni ne-Sri Lanka ngoLwesithathu.”
i-Sri Lanka isamele inqobe umdlalo emqhudelwaneni futhi uDu Preez unakile ukuthi bangafuna ukushintsha lokho ngokunqoba bedlala ne-South Africa. Uthi angeke bababukele phansi.
“Kwimidlalo yendebe yomhlaba asisoze sabukela phansi esidlala nabo,” eqhubeka. “Bakebasihlula kumqhudelwano we-ICC. Siyazi ukuthi kuzomele sikhiphe unyawo uma sesidlala nabo. Awukwazi ukucabanga lokho ngoba nje iqembu alikanqobi mdlalo nokuthi uzonqoba kalula. Umdlalo okumele siwunqobe uma sifuna ukuqhubeka emqhudelwaneni futhi sifike kuma-semi, okuyigoli lethu lokuqala.”
“Sizobabheka esizodlala nabo, kodwa sizocitha isikhathi sethu ezinhlelweni zethu zomdlalo futhi nesiqiniseko sokuthi sizowasebenzisa kahle ngokwazi kwethu ngosuku lomdlalo.”
Umdlalo we-South Africa ne-Sri Lanka uzovezwa kuSuperSport 2 kusukela ngo-11:00 (SAST). Imiphumela ikhona kwa-Cricket South Africa ezindaweni zokuxhumana, uFacebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty Isihluku sika-Van Niekerk no-Kapp bahlanganisa ukunqoba kumaProteas esifazane AmaProteas esifazana agxile kumdlalo wabo uMoreeng unelisekile ngendlela ethathwa iqembu lakhe Umdlalo wamaProteas esifazane kanye ne-New Zealand uyekiwe ngenxa yemvula Siyazi ukuthi kuzomele silethe umdlalo ohamba phambili” – uVan Niekerk AmaProteas esifazane “alungile futhi alindele ukudlala” – Van Niekerk uVillani noPerry bahlanganisa ukunqoba okwanele kuma-Southern Stars